Akụkọ - Mpempe akwụkwọ mpịakọta Zero Plastic nwetara asambodo compost na -emebi emebi nke TÜV
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ Zero Plastic nwetara asambodo compost na -emebi emebi nke TÜV
Na Mee 25th, onye isi osote onye isi oche nke TÜV Rheinland Greater China nyere DIN CERTCO na European Bioplastics Association asambodo asambodo ụlọ ọrụ mmepụta ihe na APP Sinar Mas Group Industrial Paper.
Ngwa a gbaara ezi àmà bụ akwụkwọ iko Zero Plastic® ọhụrụ nke APP Sinar Mas Group Industrial Paper. TÜV Rheinland gbara ya akaebe dabere na ụkpụrụ DIN EN13432: 2000-12 na ASTMD6400: 2019-01. Site n'inweta asambodo na -emebi emebi, ọ na -anọchite anya ngwaahịa akara Zero Plastic® agabigala nnwale na asambodo nke ụlọ ọrụ ikike dị iche iche nke ụlọ na nke mba ọzọ (asambodo mbibi compostable, nnwale nchekwa nsị nke nje, nnwale fluorine POP, ngụkọta nnwale nnwere onwe ọpụpụ, wdg. .).
N'okpuru ndabere nke mmachi ọhụrụ nke mba ahụ na plastik na mmachibido plastik, iko akwụkwọ, akpa akwụkwọ, igbe nri ehihie, wdg nke ngwaahịa APP Jinguang Group mepụtara Zero Plastic® nwere ike megharịa ya n'ime mpempe akwụkwọ ma ọ bụ megharịa ya. N'ịghọta oke itinye n'ọrụ nke mgbake akụ, kama ịgba ọkụ na nsị ala, ọ bụ ezigbo azịza iji nyere aka na nnọpụiche carbon na mbelata ikuku anwụrụ ọkụ.
Mpempe akwụkwọ na akwụkwọ mpịakọta ọgbara ọhụrụ bụ “nnukwu okirikiri” akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -adigide, yana imeputa, oriri, imegharị ihe na ịtụgharị akwụkwọ n'okpuru akara ZeroPlast® bụ “obere okirikiri”, na -echekwa nnukwu osisi maka ụwa. Dị ka onye ndu ụwa niile na ịpịpụta na ịdepụta akwụkwọ, APP dị njikere ịrụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta mmepe na -adịgide adịgide nke ihe ọmụmụ gburugburu ụwa ma baara ọgbọ anyị dị n'ihu uru.
Layer Mkpuchi ihe mgbochi gburugburu ebe nchekwa nri EPP na -eme ka mpempe akwụkwọ nwee ezigbo ihe mgbochi yana njigide ọkụ. Ọ dịghị achọ nhazi mkpuchi PE. Ọ dabara maka ịme ụdị iko akwụkwọ ọ bụla ozugbo, ọkwá akwụkwọ, igbe nri ehihie, ite ofe na nkwakọ ngwaahịa nri ndị ọzọ. Ngwọta ngwugwu dị mma na gburugburu ebe obibi;
Enweghị plastik, ọ nweghị onye nnọchi anya fluorescent, enwere ike imegharị ya ọzọ (enwere ike weghachite ya ozugbo), na -emebi emebi (100%), compostable, nchekwa na gburugburu ebe obibi, kwekọrọ na usoro mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ niile nke ihe nkwakọ ngwaahịa;